थाईल्याण्डका यौनकर्मीका रंगीन रातको दुखको कहानी! | Rajmarga
थाईल्याण्डका यौनकर्मीका रंगीन रातको दुखको कहानी!
प्रत्येक वर्ष थाईल्याण्ड घुम्न लाखौं पर्यटकहरु आउने गर्छन्। त्यहाँ आउने पर्यटकहरु मध्य कोहि पारिवारिक पर्यटन र कोहि यौन पर्यटनको लागि आउने गर्छन्। थाईल्याण्डका सडक थुप्रै यौनकर्मीहरु रहेने गर्छन भने यस सडकमा पाइने यौनकर्मीहरु यौन पर्यटनको लागि आउने पर्यटकको आकर्षण बन्ने गर्छन।
थाईल्याण्ड यौन धन्दा गैरकानुनी भएता पनि यस देशका युवतीहरु राम्रो कमाइ हुने भएका कारण यस कर्म प्रति धेरै आकर्षित रहने गर्छन। अहिलेको समयमा थाइल्याण्डमा लगभग १ लाख २३ हजार जति यौन कर्मी रहेको अनुमान गरिन्छ। कहिले बडी मसाज गर्ने बहानामा त कहिले बारमा काम गर्ने बहानामा यहाँका युवतीहरु यौन कर्ममा लागिरहेका छन्। भर्खर थाईल्याण्डमा निर्वाचित टूरिज्म मन्त्रिले यौन कारोबार पुरै ठप्प पर्न निर्देशन दिएसँगै यौन कर्मीहरुलाई गार्हो पर्ने अनुमान गरियता पनि कसरिन कारोबार गर्ने भन्ने कुरामा यहाँका यौन कर्मीहरु चलाख रहेका छन्।
यहाँका यौन कर्मीहरु विदेशि सामु प्रख्यात रहेका छन्। कोहि आफै यस पेसामा लाग्ने गर्छन भने कोहि जल-झेलमा परेर यस पेशामा लाग्ने गरेका छन्। कोहि राम्रो कमाई हुने भएका कारण यस पेशामा आउने गरेको बताउने गर्छन्। राम्रो पैसा आउने भएता पनि कहिले कहीं डलरको मनोमानीको चपेटामा पर्ने गरेको बताउछन्।
रात रंगिन बनाउनको लागि थाइल्याण्डमा थुप्रै युवतीहरु ब्याङ्ककमा यौनकर्ममा संलग्न रहने देखि शरीर मसाज गरेर पनि जिविको पार्जन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। एजेन्सी
Previous post: बन्यो काङ्ग्रेस भवन
Next post: छठ पर्वको मुख्य विधि आइतबारदेखि सुरू
बाफ रे !रेलमा पाँच तारे होटेलको सुविधा
सुहागरातमा बेहुली जब अंगालोमा आइन्, बेहुलाले प्रहरीमा गएर भने ‘मसँग धोका भयो’
‘भर्जिनिटी टेस्ट’ मा श्रमिती फेल भएपछि सुहागरातको तन्ना बोकेर अदालत पुगे श्रीमान
अचम्मको बिहे ! एकैपटक भित्र्याए एउटै बेहुलाले तीनवटी श्रीमती
स्थानीयको उजुरीका आधारमा अर्पाटमेण्टमा पुग्यो प्रहरी, त्यसपछि जे भयो…
तपाईलाई थाहा छ विवाह शब्दले युवतीहरुमा यस्ता डर उत्पन्न गराउँछ ?